Doolar iyo Doorasho Xildhibaan | Gedoonline
Doolar iyo Doorasho Xildhibaan	Added by Editor on August 6, 2012.Saved under Articles, Latest News	MUQDISHO(GMN)-Muqdisho Maanta Maxaad kula Yaabtay? Guuxa siyaasadeed ee Muqdisho ka taagan iyo Isbedelka dalka ka dhacaya marka la gaaro 20-Augosto ayaa ku dareensiinaya inuu jiro loolan siyaasadeed.
Dalka Waxaa dib ugu soo laabanaya aqoonyahano iyo dadkale oo hamigooda uu yahay inay iska dhex arkaan Masraxa Siyaasadeed ee Dalka.
Masuuliyiin ka tirsan Dowladda waqtigeeda uu dhamaaday iyo Axzaabta siyaasadeed oo ay wehliyaan siyaasiin rug cadaa ah oo dalka caan ka ah ayaa hor boodaya in boos ay ka helaan Dowladda soo socota.
“Waxa aan rabaa Xildhibaan, waxa aan doonayaa wasiir, Hamigeygu waa Jago hebil” waa hal-ku-dhigyadda aad ka dhex maqlayso dadka xusul duubka ugu jira inay iska dhex arkaan Muraayadda cusub.
Jawaabaha su’aalahaasi marka dad caqliga u saliimka ah loo bandhigo si fudud waxa ay u sheegayaan in Jawaabtu ay tahay “Jeebkaaga-Ku-Tasho” oo micnuhu yahay Doolar bixi.
Odayaasha soo xulay Xildhibaanadda cusub ee Magacoodu loo gudbiyey Madaxweyne Shariif ayaa ah kuwa bixiyey dhaqaalle aad u fara badan isla markaana aan lagu soo xulin qaab beeleed.
Tusaale kugu filan ayaa ah in Hoolka ay ku shirayeen Odayaasha ay si joogta ah ay u gaarayey dad hami ka leh ka mid noqoshadda Barlamaanka soo socda.
Maalmo gudahood qiimo koror xoogan ayaa ku yimid ka mid noqoshada Liiska Xildhibaanadda soo socda.
Todobaad gudahiisa in aad xildhibaan noqoto waxa uu Magaaladda Muqdisho ka gaaray 100-USD
Markii hore ayaa waxa uu ku bilowday 50-USD taasi oo muujinaysa sida mar qura u kacay qiimaha.
Maalmo ayaa inaga xigta in doorasho xor ah lagu qabto gudaha Dalka Soomaaliya su’ashu waxa ay tahay Xildhibaano qaab is daba marin ah lagu soo xulay ma dooran karayaan Madaxwayne xalal ah.
W.D Hanad Cali Guleed
Maaymuun-”500 oo doolar ayaan uga baxay diinta islaamka” Nala aqri.
Xildhibaan Lagu Xabadeeyey Xamar
Xildhibaan Ceynte iyo Engineer Mahdi oo Dood Siyaasadeed Kala Qayb galay Ardayda Suudaan.
Xildhibaan Madoobe nuunow oo ku guulaystay Doorashadii.
Dood Xiiso leh Xildhibaan Sacdi Ugaas Takoy Mahad :Xalka Cabudwaq +Dhagayso